10 संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > 10 संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 05/11/2021)
आकाश तिर उडेर, निम्न 10 संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू विश्वका उत्कृष्ट वास्तुकारहरूको उत्कृष्ट कृतिहरू हुन्. भविष्यका तत्वहरूको मिश्रण, दिगो र हरियो सुविधाहरू, यी 10 सुन्दर भवनहरू पनि विश्वभरका धेरै भ्रमण गरिएका स्थलचिन्हहरू हुन्.
1. संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू: शार्ड
306 मिटर अग्लो, शार्ड टावर लन्डनको सबैभन्दा चिनिने गगनचुम्बी भवन हो. संग लन्डन मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य मंच, तपाईं गगनचुम्बी भवनको छतबाट सुन्दर शहर क्षितिज देख्न सक्नुहुन्छ. हेर्ने मञ्च हो 244 मिटर र लन्डनको प्रत्येक कुनामा लगभग सबै तरिकाले दृश्यहरू प्रदान गर्दछ.
मा खोलियो 2003, शार्डले विश्वभरका आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ. धेरै जसो किनभने अद्वितीय वास्तुकला डिजाइन संसारका सबै महान गगनचुम्बी भवनहरू बीच बाहिर खडा छ. शार्ड डिजाइनमा गिलासका टुक्राहरू हुन्छन् र यसलाई गिलासको टुक्राको रूपमा डिजाइन गरिएको हो, त्यहाँ छन् 11,000 शार्डको निर्माणमा ग्लास प्यानलहरू. त्यसैले, जब लन्डनमा यो भ्रमणको लायक छ, भुइँमा शार्ड रेस्टुरेन्टहरूमा एक अद्भुत सूर्यास्त डिनरको साथ 31-33, UK मा उच्चतम.
2. संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू: इभोलुसन टावर मास्को
246 मिटर अग्लो, मस्कोको घुमाउरो इभोलुसन टावर संसारको सबैभन्दा आकर्षक गगनचुम्बी भवनहरू मध्ये एक हो. सुन्दर गगनचुम्बी भवनले मस्को शहरको मस्कोको व्यापारिक जिल्लामा प्रभुत्व जमाउँछ र मस्को नदीलाई हेर्छ।. मेट्रो स्टेशन संग, सपिङ्ग मल, कार्यालयहरू, र हरियो क्षेत्रहरू, द इभोल्युसन टावर मस्कोमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका आकर्षणहरू मध्ये एक हो.
वास्तुशिल्प संरचना मन छुने र विस्मयकारी छ, इभोल्युसनलाई एक बनाउने रूस मा भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा आश्चर्यजनक ठाउँहरु. त्यसैले, रूसी गगनचुम्बी भवनमा विश्वभरका धेरै यात्राका तस्बिरहरू छन् र विश्वभरका वास्तुविद् र इन्जिनियरहरूको लागि अनुकरणको स्रोत हो भन्न आवश्यक छैन।.
3. संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू: एम्पायर स्टेट बिल्डिंग
संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध कार्यालय भवन, तब देखि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931. विश्वको सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण गर्ने दौडमा 1920 को दशकमा उत्कृष्ट न्यूयोर्क स्क्र्यापर निर्माण गरिएको थियो।. एम्पायर स्टेट बिल्डिङले दौड जित्यो जब आर्किटेक्ट रास्कोब र स्मिथले म्यानहट्टनको स्काइलाइनमा हावी हुने महाकाव्य गगनचुम्बी भवन डिजाइन गरे। 381 मिटर.
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयोर्कको हेर्नैपर्ने स्थलचिन्हहरू मध्ये एक हो. ३८ औं तलाबाट, तपाईं कहिल्यै नसुतेको सहरसँगै सूर्योदयको स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ. केन्द्रीय पार्क को दृश्य संग, टाइम्स स्क्वायरमा पाँचौं एभिन्यू, एम्पायर स्टेट बिल्डिंगका दृश्यहरू अविस्मरणीय छन्.
4. सांघाई टावर
संसारको दोस्रो सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी भवन, सांघाई टावर पुग्छ 632 मिटर. लुकाउने सांघाई स्काइलाइनमा प्रभुत्व जमाउँदै, सांघाई टावरमा वर्षभरि सांघाईको दृश्यहरू प्रदान गर्ने संसारको सबैभन्दा उच्च दृश्य प्लेटफर्म छ.
अतिरिक्त अद्वितीय सुविधाहरू एक गिलास मुखौटा समावेश छ, घुम्ने शीर्ष संग, र सबैभन्दा मनमोहक सुविधाहरू मध्ये एक हरियो भित्री ठाउँहरू छन्. हरियो डिजाइन को अतिरिक्त, टावर आफैं भित्र एक शहर को रूप मा डिजाइन गरिएको छ, होटल, खुद्रा ठाउँहरू, कार्यालयहरू, र जनताको लागि आगन्तुक ठाउँहरू. सांघाई टावर मध्ये एक मात्र होइन 10 संसारको सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू, तर यो पनि सबैभन्दा ठूलो हो, समायोजन गर्ने क्षमता संग 16,000 मान्छे.
5. बैंक अफ चाइना टावर हङकङ
हङकङको स्काइलाइनमा प्रभुत्व जमाउँदै, बैंक अफ चाइना भवन चीनको सबैभन्दा उल्लेखनीय गगनचुम्बी भवनहरू मध्ये एक हो. मा 367 मिटर, बैंक अफ चाइना टावर विश्वको सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी भवनहरू मध्ये एक हो र हङकङको केन्द्रमा रहेको सबैभन्दा उल्लेखनीय भवन हो।. बाहिरी भागमा तीव्र किनाराहरू र त्रिकोणीय डिजाइनहरू सहित, बैंक अफ चाइनाले तपाईलाई घण्टौंसम्म हेरिरहनेछ.
जबकि हङकङका अधिकांश आगन्तुकहरूले यो गगनचुम्बी भवनलाई अनौठो पाउँछन्, त्यहाँ केहि छन् जो प्रभावित छैनन्. कारण भनेको धेरै सुविधाहरू हो जसले BOC लाई अर्कोबाट अलग गर्दछ सुन्दर भवनहरु चीनमा. तीखो किनारहरू र X, फेंग शुई मा नकारात्मक प्रतीक हो. यद्यपि, सम्भावित नकारात्मक दुर्भाग्यले यात्रुहरूलाई हरेक दिन यो वास्तुकलाको सुन्दरताको प्रशंसा गर्नबाट रोक्दैन.
6. मरीना बे स्यान्ड्स सिंगापुर
एक को 10 संसारमा सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू, एक रिसोर्ट छ. मरीना स्यान्ड्स मरीना खाडीको सामना गर्दछ, रेस्टुरेन्ट संग, एक क्यासिनो, एक थिएटर, तीन टावरहरूमा, ३४० मिटर लामो स्काईपार्कद्वारा जोडिएको. साथै, सबैभन्दा अचम्मको कम्प्लेक्समा संसारको उच्चतम इन्फिनिटी पूल छ.
वास्तुकार मोशे सफडीले गगनचुम्बी भवनको डिजाइन कार्डहरूको डेकबाट प्रेरित भएको बताए।. त्यहाँ इन्फिनिटी पूलबाट सिंगापुरको अद्भुत दृश्यहरू छन्, 57 औं तलामा. साथै, तपाईं बगैंचाबाट द बेबाट अद्भुत मरीना बे स्यान्ड्स गगनचुम्बी भवनको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।, सिंगापुरमा घुम्नको लागि अर्को सुन्दर ठाउँ.
7. संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू: टोकियो स्काईट्री
संग2अवलोकन डेक, टोकियो स्काईट्री गगनचुम्बी भवन विश्वको शीर्ष पाँच अग्लो गगनचुम्बी भवनहरू मध्ये एक हो. मा 634 मिटर, तपाईं संसारको उच्चतम क्याफे मा कफी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, टोकियोको अचम्मको दृश्यको साथ. स्काईट्री एक टेलिभिजन र प्रसारण टावरको रूपमा निर्माण गरिएको थियो र पछि टोकियोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थलचिन्ह बन्यो।.
अवलोकन डेक को अतिरिक्त, र क्याफे, तपाईं यसको आधार मा एक एक्वैरियम र तारामंडल भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. अवलोकन डेक प्रस्ताव गर्दछ 360 जापानको सबैभन्दा भविष्य र रोमाञ्चक शहरको डिग्री दृश्यहरू, र एशिया. तल रेखा, टोकियोको स्काईट्री गगनचुम्बी भवनको दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न र धेरै अद्भुत सुविधाहरूको भ्रमण गर्न पूरा दिन बिताउन तयार हुनुहोस्।.
8. क्यान्टन टावर गुआंगझौ
चीन आधुनिक र पुरातनको आकर्षक मिश्रण हो, जहाँ मन्दिरहरू बादलहरूमा उठ्ने गगनचुम्बी भवनहरूको छेउमा बाँच्छन्. मध्येको एउटा चीन मा भ्रमण गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु गुआंगझौ र खगोलीय क्यान्टन टावर हो. महाकाव्य मा 604 मिटर उचाइ, क्यान्टन टावर गुआन्झाउको कुनै पनि बिन्दुबाट देखिन्छ.
क्यान्टन टावरमा गर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो चीजहरू मध्ये एक शीर्षमा ट्राम सवारी लिनु हो. त्यसैले, यदि तपाईलाई उचाइको डर छैन भने, राति आउनुहोस्, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo toaviewing deck ticket, क्यान्टन टावर भ्रमण गर्नु एक उत्कृष्ट अनुभव हो र बेस जव-ड्रपमा उभिनु मात्र होइन.
9. लिबियन अन्तर्राष्ट्रिय भवन
सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना संसारको सबैभन्दा लुभावनी गगनचुम्बी भवनको एक शानदार विशेषता हो. लिबियन अन्तर्राष्ट्रिय गगनचुम्बी भवन हो 121 यसको अनुहारमा झरना सहित मिटर अग्लो. सबैभन्दा अग्लो झरनाले चार वटा पम्प र यसको आधारमा वर्षा हुन्छ. तपाईं आफ्नो चीन यात्रा मा यो उल्लेखनीय भवन देख्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी गुइयाङमा, दक्षिणपश्चिम चीन मा.
लिबियन गगनचुम्बी भवन संसारको सबैभन्दा अग्लो नहुन सक्छ, तर यो निश्चित रूपमा शीर्ष मध्ये एक हो5संसारमा सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू.
10. संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू: अग्बर टावर बार्सिलोना
टोरे ग्लोरीज बार्सिलोनाका धेरै सुन्दर स्थलहरू मध्ये एक उल्लेखनीय गगनचुम्बी भवन हो. 38-कथा 144 मिटर गगनचुम्बी भवन फ्रान्सेली वास्तुकारको सिर्जना हो. सुन्दर गगनचुम्बी भवनको आकार आकाशमा उठ्ने गीजरको छ र मोन्टसेराट पर्वत पछि डिजाइन गरिएको थियो।. नजिकबाट हेर्दा तपाईंले देख्नुहुनेछ कि सम्पूर्ण अनुहार गिलासले बनेको छ.
यद्यपि, अग्बर टावरको सबैभन्दा आकर्षक विशेषता रंगीन रोशनी हो. स्पेनी गगनचुम्बी भवन छ 4,500 एलईडी यन्त्रहरू. यी एलईडी यन्त्रहरूले छविहरू प्रदर्शन गर्छन् र उत्पादन गर्न सक्छन् 16 लाख रंग. यसबाहेक, यदि तपाइँ Agbar टावर सर्कल गर्नुहुन्छ भने तपाइँ अर्को अद्भुत ल्यान्डमार्कको सन्दर्भ देख्नुहुनेछ, गौडीको सगरदा परिवार. त्यसैले, कुनै पनि समय तपाईं यो सुन्दर गगनचुम्बी भवन भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ, दिनभरि प्रशंसा गर्न तयार हुनुहोस्.
यहाँ मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई यात्राको योजना बनाउन मद्दत गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं 10 विश्वभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू रेलद्वारा.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोष्ट "विश्वव्यापी १० सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवन" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ?? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)